Uchwepheshe We-Semalt Uveza Izindlela Zokuvimbela Amagciwane Ekhompyutha
Sonke sasinokuhlangana okubuhlungu nokungazilibaleki ngamagciwane ekhompyutha ngesikhathi esithile. Esinye isifundo esivumelana ngaso sonke isikhathi ukucabanga okufisa ukwazi izindlela zokugwema noma ukuqeda lezi zingciwane ngaphambi kwesikhathi.
Ukungakhathazeki, u-Ivan Konovalov, oyedwa ochwepheshe abanolwazi kakhulu uSemalt , kulesi sihloko ubonisa izindlela ezingokoqobo zokugwema ukutheleleka kwegciwane lesikhompyutha. Zihlanganisa:
Njalo Izinhlelo Zokulanda Zisuka Emithonjeni Esemthethweni Nokwethenjelwa
Lezi amagciwane ziyathinta futhi zishintshe izinhlelo zekhompyutha ngaleyo ndlela zithole ukungena ohlelweni lwakho. Ngakho-ke, kufanele ulande izinhlelo ezivela kumhlinzeki wangempela noma iwebhusayithi yesithathu.
Gcina isipele sekhompyutha
Kuhlale kunconywa ukuba nekhophi eyengeziwe yamakhophi akho amahloni. Ukusekela emuva kukuvumela ukuba ululame yonke idatha yakho bese ubuyela emuva nemisebenzi evamile.
Skena futhi Qinisekisa Okunamathiselwe Kwama-imeyili
Ukuqamba okusha edolobheni ukutheleleka ngegciwane ngezinamathiselo ze-imeyili noma ngenhloso noma ngokungazi. Izinamathiselo ze-imeyili ezinonya zifaka isimiso ekuvuleni kwemeyili ngakho-ke isidingo sokuskena nokuqinisekisa lezi zinamathiselo ngaphambi kokulanda. Kuyinto ewusizo nakakhulu ngoba umthombo we-imeyli ungahle unqatshelwe futhi ungaqapheli ukuthi udlulisa ama-virus.
Faka ama-Anti-Virus nama-Malware Solutions
I-anti-virus kanye nesofthiwe ye-malware ebuyekeziwe ivuselela ikhompyutha yakho ekuphumeni nasekukhipheni izinsongo ezikhona..Umqondisi angase futhi asebenze izikrini zesistimu ezijwayelekile ngezinhloso zokuphepha.
Khubaza i-imeyili yesithombe sokubuka kuqala
Akudingeki ulande amafayela anesifo kuma-attachments we-imeyili ukuze uthole amagciwane kusistimu yakho. Ukutheleleka kungaqala ngokubuka kuqala imifanekiso ku-imeyili yakho. Ukuze ugweme lokhu, khubaza ukubuka kuqala kwesithombe sekhasimende lakho le-imeyili ngenkathi ubuka kuphela lezo zithombe ezitholwa emithonjeni ethembekile.
Ukubuyekezwa Kwenqubo Yokusebenza Yonke
Uhlelo lwakho lwekhompyutha luzohlala lukhululekile kumagciwane uma wenza umzamo wokuba nesistimu yokusebenza ebuyekeziwe ngaso sonke isikhathi. Izibuyekezo zenza kube izingxoxo futhi zikwazi ukubhekana nezinkinga zamakhompyutha zakamuva.
Ukukusebenzisa i-Computer Firewall
Ngisho noma ubuyekeze izinhlelo zakho kanye nesistimu yokusebenza, i-firewall iyinhloko yokugcina yekhompiyutha yakho yokugcina ngokuvikela izifo zegciwane. Yigcine futhi ikhuthele ukugwema ukutheleleka kwegciwane lesithathu.
Yenza Ukusebenzisa Amalungelo E-Computer Administrator
Ikhompyutha kufanele ibe nomlawuli oyedwa kuphela onamalungelo namalungelo okufaka izinhlelo. Sebenzisa lawa malungelo ukugwema abasebenzisi bangaphandle ekuvezeni uhlelo lwakho ezinkingeni ezinjalo.
Ukuqapha kwe-PC njalo
Yebo, ngeke wazi ukuthi umlilo we-PC wakho awukwenziwe, noma izibuyekezo ziyadingeka izinhlelo zakho ze-OS ngaphandle kokuthi uhlole njalo uhlelo lwakho olufanayo.
Landela izaziso zekhompyutha
Izinhlelo zokulwa ne-anti-virus nezinhlelo ze-malware zikhokhwa ngendlela yokuxwayisa umsebenzisi kusengaphambili uma kudingeka izibuyekezo zakamuva noma zitholakale. Bazokwazisa futhi umsebenzisi uma izinsongo ze-malware zitholwa. Ungalokothi unganaki ukuxwayisa kanye nezaziso ezinjalo. Kumanothi afanayo, landela izaziso kuzo zonke izibuyekezo zekhompyutha ngokuhamba kwesikhathi.
Hlela futhi Ugcine Umnyango we-IT
Ngezinhlangano ezinkulu, udinga umnyango we-IT ukugcina amaseva wakho wekhompuyutha nezinhlelo zokusebenza kahle.